ပေါက်ကံ ညစျေးတန်းသို့ အလည်တစ်ခေါက်။ - ဒိုးမယ်
ဒီနေ့ပြီးလို့ မနက်ဖြန်က ဆိုရင်တော့ အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်ပြီး စောင့်မျှော်နေတဲ့ ပျော်စရာ သောကြာနေ့ (TGIF) လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်စရာ ကောင်းလှတဲ့ TGIF လေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုံစုံညီညီ နဲ့ လူတိုင်းရဲ့ အကြိုက်ကို တစ်နေရာထဲမှာ ရရှိနိုင်မယ့် နေရာလေး တစ်ခုကို လမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီနေရာလေးကတော့ ပြည်သူ့ဥယျာဉ်၊ Happy Zone ၊ လေယာဉ်ကွင်းနားမှာ ရှိတဲ့ ‘Pauk Kan Food court & Night Bazaar’ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Doemal အဖွဲ့ရဲ့ ‘Pauk Kan Food court & Night Bazaar’ ကို သွားခဲ့တဲ့ TGIF အတွေ့အကြုံလေးကို ဒီအပတ်မှာ TGIF လုပ်မယ့်သူတွေအတွက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
‘Pauk Kan Food court & Night Bazaar’ ကို စဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အမိုက်စား decoration နဲ့လေယာဉ်ကြီးတွေ၊အပင်တွေမှာ လှလှပပလေးချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ပုသိမ်ထီးလေးတွေ၊ လှလှပပလေး ခင်းကျင်းထားတဲ့ စားသောက်စားပွဲများ ကတော့ တကယ်ကို လှပပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်စရာနေရာတွေပဲချည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ စုံလင်လှတဲ့ အစားအသောက်ဆိုင် တွေအများကြီးကို မြင်လိုက်ရတာကြောင့် Doemal တစ်ဖွဲ့လုံး တဝစားမယ်ဆိုပြီိး ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။
Food Court ထဲမှာဘယ်လိုဆိုင်တွေရှိပါလိမ့်???
‘Pauk Kan Food court & Night Bazaar’ မှာတော့ အမျိုးအစားစုံလင်လှတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တော်တော်များများ ရှိတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ စုံလင်လှတဲ့ ကချင်၊ ရခိုင်၊ ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ ကိုရီးယား အပြင် အကင်၊ ဟော့ပေါ့၊ တရုတ်အစားအစာ နှင့် အချိုပွဲအေးအေး လေးကို ရောင်းချတဲ့ ဆိုင်လေးတွေ ရှိပါတယ်။Doemal အဖွဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ ဆိုင်တွေကတော့ဝက်သားတုတ်တိုးကြိုက်သူတွေအတွက် Porky၊ ရှမ်းအစားအစာ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် အင်းလေးအမှတ်တရ၊ Best friend ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်၊ I Cha Milk tea၊ ပန်းတော်ဝင် ကြေးအိုးနှင့် တရုတ်အစားအစာ၊ ရွှေရိုးရာ တိုင်းရင်းသားအစားအစာ၊ Rice bowl၊ ရခိုင်မုန့်တီ၊ H2K ထိုင်းဆိုင် နှင့် အခြားသော Street food စုံစုံလင်လင်များကို ဆိုင်ခန်းလေးတွေနဲ့ သပ်ရပ်သန့်ရှင်းစွာ ခင်းကျင်းထားတဲ့ ဆိုင်လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ။ ဒီလိုမျိုး အစားအစာ အစုံအလင်ရရှိတာကြောင့် အစားအသောက် အကြိုက်မတူကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး စားသောက်လိုသူတွေအတွက်တော့ တကယ်ကို အဆင်ပြေစေမယ့် နေရာကောင်းလေးပါ။
Coupon လေးတွေနဲ့ ဝယ်စားကြမယ်။
‘Pauk Kan Food court & Night Bazaar’ မှာ အစားအစာတွေကို ဝယ်ယူစားသောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ငွေသားနဲ့ ပေးချေလို့မရပါဘူး။ ထူးခြားလှတဲ့ ငွေချေစနစ် ဖြစ်တဲ့ Coupon လေးတွေနဲ့သာ ဆိုင်တွေမှာ ငွေရှင်းရမှာပါ။ ဆိုင်တွေကလည်း ပြန်အမ်းငွေအဖြစ် Coupon လေးကိုသာ ပြန်အမ်းပေးမှာ ဖြစ်တာကြောင့် တမူ ထူးခြားလှတဲ့ Night market အတွေ့အကြုံကို ခံစားစေနိုင်ပါတယ်။ Coupon လေးတွေကိုတော့ Food Court ရဲ့ ဝင်ပေါက်နားလေးမှာ ရှိတဲ့ Coupon ကောင်တာ မှာ မိမိသုံးလိုသလောက် ငွေနဲ့ Coupon လေးတွေကို ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ ကိုယ်စားချင်တာ ဝယ်စားပြီး ကူပွန်တွေ ပိုနေရင်လည်း ငွေသားနဲ့ ပြန်လည် လဲလှယ်ပေးတာကြောင့် အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေစေမှာပါ။
အရသာ၊ စျေးနှုန်း နှင့် နေရာ အခင်းအကျင်း??
ကိုယ်စားချင်တဲ့ အစားအစာတွေကို Food Court မှာ လိုက်ကြည့်ပြီး မှာယူထားပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ နေရာမှာ နေရာ ယူပြီး ဘော်ဒါတွေနဲ့ စကားပြောရင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ဖျော်ဖြေပေးနေတဲ့ Unplugged Music ကို နားဆင်ရင်း ဖြစ်ဖြစ် အေးအေးဆေးဆေး စောင့်လိုက်ပါ။ ဆိုင်တွေကမှာထားတဲ့ အစားအစာတွေကိုအချိန်မကြာပဲ လာပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။
အစားအသောက်စျေးနှုန်းတွေကတော့ ၁၀၀၀ကျပ်ဝန်းကျင်ကနေ ၅၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်ခန့်ထိရှိတာကြောင့် သင့်တင့် မျှတတဲ့ စျေးနှုန်းအနေအထား ရှိတာကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
Doemal အဖွဲ့ စားခဲ့တာတွေကတော့ ပူပူနွေးနွေးလေးနဲ့ အရသာကောင်းလှတဲ့ ကြက်တောင်ပံကြော်၊ ဂျပန်စတိုင်စစ်စစ်နဲ့ အရသာကောင်းမွန်လှတဲ့ ဆူရှီ၊ ကင်းမွန်ခေါင်းကြော်၊ ဂျပန်ရဲ့ ရိုးရာ ဟင်းချို မီဆိုစွပ်၊ လတ်ဆတ်ပြီး မီးသွေးမီးဖိုမှာ မီးအေးအေးလေးနဲ့ ကင်တာတဲ့ ကြက်ကင်၊ အကင်များ၊ ထိုင်းစတိုင်အပြည့်နဲ့ တုန်ရမ်းဟင်းချိုနဲ့ ထမင်းကြော် နဲ့ ဂျပန်စတိုင် ကြက်ဥပေါင်း စတာတွေကို အဝစားခဲ့ပါတယ်။
အရသာ အနေနဲ့ ကတော့ ပေးရတဲ့ စျေးနဲ့ တန်လှအောင် အရသာရှိပြီး Night market ရဲ့ အငွေ့အသက်ကို အပြည့်အဝ ခံစားရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘော်ဒါတွေနဲ့ဆိုင်တွေကို သေချာ လိုက် ကြည့်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေကို ထိထိမိမိနဲ့ မှာတတ်မယ်ဆိုရင် ၂၀၀၀၀ကျပ် လောက်နဲ့ TGIF ကို Night Life Feel အပြည့်နဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး စားသောက် နိုင်မှာပါ။
Beer နှင့် ယမကာ ကိုတော့ ‘Pauk Kan Food court & Night Bazaar’ မှာ လုံးဝမရောင်းပါဘူး။ သောက်ရင်း စားချင်သူတွေအတွက် အပြင်ကနေ ဝယ်လာပြီး သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်။
Pauk Kan Food court & Night Bazaar ကို တော့ အပတ်စဉ် သောကြာ၊ စနေ၊တနင်္ဂနွေ နေ့တွေမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတာကြောင့် TGIF အတွက်သာမက ပိတ်ရက်မှာ မိသားစုနှင့် အပန်းဖြေရင်း စားသောက်နိုင်မယ့် နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ အပတ်တိုင်းလည်း မတူညီလှတဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲတွေ၊ ဂိမ်းShow တွေရှိတာကြောင့် ‘Pauk Kan Food court & Night Bazaar’ ကဆိုရင် Night Life ကို အကောင်းဆုံးသော Street foods တွေကို မြည်းစမ်းရင်း ပျော်စရာအချိန်လေးကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ် Doemal က လမ်းညွှန်ပါရစေ။
ဒါကြောင့် စားချင်တဲ့ အစားအစာကို စိတ်ကူးလာလိုက်ပါ။‘Pauk Kan Food court & Night Bazaar’ မှာ အကုန်ရှိပါတယ်နော်။
လိပ်စာကတော့ – Happy Zone အနီးပြည်သူ့ဥယျာဉ် ၊ ဓမ္မစေတီလမ်း ၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်စပ် အကြောင်းအရာများ >>ပေါက်ကံ ညစျေးတန်း